Pikantsary Ara-Kolontsaina Laharana faha-6 : Voninahitra · Global Voices teny Malagasy
Lahatsoratra fohy miresaka torohay ara-kolontsaina ao amin'ny fampitam-baovao, alefa tsikelikely
Voadika ny 16 Marsa 2018 8:04 GMT
“Honor Them,” par LucasHimo sur Flickr (CC BY-ND 2.0).
Inona no tonga ao an-tsainao voalohany raha vao maheno ny teny hoe voninahitra? Miova araka ny haino aman-jery fihainonao isan'andro ny valin'izany fanontaniana izany. Ao amin'io laharana vaovao momba ny Sarimihetsika momba ny kolontsaina, manazava izahay ny fomba fampiasana ny teny hoe voninahitra eo anivon'ireo haino aman-jery lehibe ao Etazonia sy Pakistana.
Fa maninona no ireo firenena roa ireo? Nosafidianay ny haino aman-jery ao Etazonia satria izy ireo manao tatitra matetika momba an'i Pakistana, sy ny ao Pakistana satria nalaza naneran-tany ny zava-nitranga vao haingana idiran'ny voninahitra. Iray amin'ireo firenena miozolomana misokatra indrindra amin'ny haino aman-jery tandrefana izy, ary araka izany dia nieritreritra izahay fa mety hahaliana ny fandinihana ny fahasamihafana eo amin'ny filazalazana io voambolana io.
Manome fanalavana maro ny hoe voninahitra ny Larousse: amin'ny frantsay.Amin'ny teny anglisy, anarana iray izay misolo tena mampiseho “fitsipiky ny fitondran-tena” izay mandrisika ny tsy hanatanteraka asa iray izay manary ny hasin'ny tena na ny an'ny hafa midika hoe: “manaja, manome voninahitra, manandratra”.
Mba hanomezana hevitra tsara ho anareo ny fampiasana azy amin'ny andavanandro, nanao fikarohana tao amin'ny lahatahiry an'ny Media Cloud eo amin'ireo lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2015 ka hatramin'ny 2017 mikasika ny teny hoe honor sy ny honour [Rakitsoratra Amerikana sy Anglisy mifandraika amin'ny anarana sy ny matoanteny,Ndt]. Amin'ny fomba ahoana no mampiavaka ny haino aman-jery malaza eo amin'ireo mpamaky Amerikana sy ny an'ny teny anglisy, eo amin'ireo mpamaky Pakistaney, na tsia?
Kisarin'ny lohahevitra miseho miaraka amin'ny voambolana voninahitra, araka ny habetsany, ao anatin'ny santionan-dahatsoratra nangonin'ny Media Cloud ho an'ny haino aman-jery amerikana an-tserasera indrindra teo anelanelan'ny taona 2015 sy 2017. (jereo ny fanadihadiana ôrizinaly)
Any Etazonia : “Fahatsiarovana”, “bokotromaroholatra” ary “fijoroana an-dabozia”
Araka ny asehon'ilay kisary etsy ambony, maro ireo teny manan-danja mahaliana no mifandray amin'ny teny hoe voninahitra. Tao anatin'ity fanadihadiana ity, nifantoka tamin'ny sasantsasany sy izay fandikana mety tamin'ireo izahay. Ao amin'ny fampitam-baovao amerikana, matetika tsy ampoizina mifandraika amin'ny fireharehana, fankalazana ary fanajana ny fanirian'ny olona ny voninahitra, :
Any an-danitra sa any amin'ny hopitaly? zazavavy kely 5 taona no manapa-kevitra]
vaovaon'ny CBS ny oktobra 2015
Nilaza ny fianakaviana iray ao Oregon fa hanaja ny fanirian'ny zanany vavy 5 taona izay marary mafy fa aleony mandeha any an-danitra fa tsy hiverina any amin'ny hopitaly raha miharatsy ny toe-pahasalamany.
Nandritra izay roa taona farany izay, namoaka lahatsoratra maherin'ny 155.000 ahitana ny teny hoe voninahitra ireo fampitam-baovao mitodi-doha amin'i Etazonia. Tanatin'ireo teny manan-danja nisarika ny sainay ny “Fahatsiarovana” , “bekotromaroholatra” ary “fijoroana an-dabozia”
Karazana fahatsiarovana inona? Lohahevitra lehibe ny Adin'i Vietnam sy ny famonoana tao Orlando sy Virginia. Manondro hetsika mahery setra ary mampiasa ny teny hoe voninahitra mba hanomezam-boninahitra ireo olona tsy maty sy ireo niharam-boina ireo lahatsoratra ireo, dia ny fitifirana tamin'ny volana jona 2016 tao amina trano fandihizana pelaka ao Orlando sy tamina lanonana fanomezam-boninahitra ireo bekotromaroholatra ao amin'ny fasana nasionaly tao Arlington nandritra ny Memorial Day [fr].
Nampiasaina tao amin'ireo lahatsoratra marobe miresaka bekotromaroholatra ihany koa ny teny hoe voninahitra, ireo tafavoaka velona tamin'ny herisetra mahery vaika sy ireo maherifo na omen'ny daholobe fanajana
Amin'ny ankapobeny, manaitra ny mahatsikaritra fa rehefa hiresaka ireo toejavatra mahery setra toy ny fitifirana na fanafihan'ny mpampihorohoro, dia mifandraika indrindra amin'ny asa fanajana ireo niharan-doza sy ireo tsy maty fo aman'aina ny teny hoe voninahitra.
Ao Pakistan : “maritiora”, “tafika” ary “niharam-boina”
Voatonona koa ao amin'ny fampahalalam-baovao Pakistaney miteny anglisy ity fampifandraisana ireo niharam-boina sy ny haja (voninahitra) ity. Miseho ho anisan'ireo teny matetika ampiasaina ny maritiora, ny tafika ary ireo niharam-boina.
Kisarin'ireo lohahevitra miseho eo anilan'ny voambolana hoe voninahitra, araka ny fiverimberenany, ao amin'ny lahatsoratra nangonin'ny haino aman-jery amin'ny teny anglisy mikasika an'i Pakistan tao amin'ny NewsFrames teo anelanelan'ny taona 2015 sy 2017 (Jereo ao amin'ny Media Cloud ny fanadihadiana ôrizinaly)
Nandritra izay roa taona izay, namoaka lahatsoratra fara fahakelily 11.185 ahitana ny voambolana hoe voninahitra (voninahitra) ireo haino aman-jery nokinendry tao Pakistan.
Mitana toerana lehibe ny lahatsoratra mikasika ny tafika sy ny miaramila. Maneho resaka miaramila sy ny olom-pirenena maty noho ny fanafihan'ny mpampihorohoro ny fampifandraisan'ny teny hoe maritiora. Dia toy izany ity lahatsoratra miresaka mpanamory fiaramanidina Air Force Pakistaney antsoina hoe Maryam Mukhtar ity, izay maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina nandritra ny iraka fampiofanana.
Mampiseho ny famakafakana ireo lahatsoratra ireo fa lohateny lehibe any amin'ireo haino aman-jery pakistaney sy Amerikana ny famonoana, ny niharam-boina ary ny herisetra. Mifanohitra amin'izay, nampidirin'ireo tontolon'ny haino aman-jery roa ireo tao anatin'ny lahatsoratr'izy ireo ihany koa ny teny famonoan'olona na heloka bevava ataon'ny lehilahy Silamo amin'ny fitaterana herisetra ao Pakistana na firenena hafa any Azia atsimo atsinanana.
Ohatra,niresaka betsaka an'i Sharmeen Obaid-Chinoy ireo lahatsoratra miresaka famonoana sy i Pakistana tao anatin'ny haino aman-jery amerikana. Talen-dahatsary fanadihadiana nahazo Oscar i Ramatoa Obaid-Chino izay nanatontosa sarimihetsika fanadihadiana miresaka ilay tafavoaka velona tamin'ny heloka bevava ho fiarovam-boninahitra. Raha atao amin'ny fiteny hafa dia misy ireo voambolana manokan'i Pakistan hafa toy ny incluent murdered [novonoina], raped [naolana] ary families [fianakaviana].
Amin'ny ankapobeny ao Pakistana dia voafaritra amin'ny hoe “famonoana olona iray ataon'ny ao amin'ny fianakaviany ihany noho ny faharesen-dahatra fa nanala baraka ny fianakaviany ilay niharam-boina” ny heloka fiarovam-boninahitra.
Ny alatsinainy, nilaza ny ny praiminisitra Nawaz Sharif fa handray ny fepetra rehetra ilaina hampitsaharana ny endrika fanavakavahana amin'ny vehivavy ny governemanta (…) Nilaza izy fa tsy mety ny mamono amin'ny anaran'ny voninahitra ary hapetraka ny lalàna hentitra mba hampitsaharana io fomba fanao tsy araka ny maha olona io izy.
Fitoviana sy fahasamihafana
Mitondra antsika amin'ny fitoviana misy eo amin'ny haino aman-jery Amerikana sy Pakistaney momba ny toejavatra ahitana ny niharam-boina sy maherifo sy bekotromaroholatra ary maritiry ireo angona ireo. Na izany aza, tsy tahaka ny tany Etazonia, maneho fa fa afaka mamerina ny voninahitra ny fanaovana herisetra ao Pakistana, ary mety manondro ny fisarahan-kevitra eo amin'ny firenena roa ny fampiasana ilay voambolana eo amin'io lafiny io.
Mba hamaritana raha midika fahasamihafan-kevitra lehibe eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina tsy manam-paharoa ny fiteny hoe famonoana famerenam-boninahitra, dia mila halalinintsika akaiky izany lahatahiry izany: hiresaka izany izahay amin'ny lahatsoratra manaraka.
Manampy antsika hanontaniana tokoa ny fahasamihafana sy ny fitovian'ny kolontsaina ity fandalinana voalohany ity. Noho izany, mahaliana tokoa ny fampiasana ny teny hoe voninahitra ao Etazonia sy ao Pakistan: Moa ve misy heviny tokoa ny teny hoe voninahitra ivelan'ny resaka ady sy herisetra?
Ireto misy lahatsoratra sasantsasany an'ny global voicess mikasika io lohahevitra io: mazotoa mamaky!
Mampanatrika An'i Pakistan Amin'ny Famonoan'Olona Hiarovam-Boninahitra Ny Sarimihetsika Nahazo Amboara An'i Sharmeen Obaid Chinoy [mg]